UKUKHETHA NJANI UBUNGAKANANI BERUG (ISIKHOKELO SOYILO) - UKUHOMBISA
Eyona Ukuhombisa Ukukhetha njani Ubungakanani beRug (Isikhokelo soYilo)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sendlela yokukhetha ubungakanani bombhoxo kubandakanya ubeko oludumileyo kunye noyilo lwangaphakathi.
Umntu unokucinga ukuba xa ukhetha ityali olona khetho lubalulekileyo ngumbala kunye nepateni, kodwa ngokuchaseneyo nobukhulu benza umahluko omkhulu. Ubungakanani bombhoxo bunokuthetha umahluko phakathi kwama-echoes kwigumbi kunye nokugagamela indawo. Uyilo ngalunye kunye nokuseta kuzisa ukuseta okwahlukileyo okufuna iiragi ezincinci okanye ezinkulu ukuchaza izithuba kunye nokuzisa intuthuzelo kwindawo. Iirugs zinokunceda kwimicimbi ye-acoustic kunye nokuthintela ukubeka iinyawo ezinganxibanga kumgangatho oqinileyo. Olunye ubungakanani obufanelekileyo buxoxwa ngezantsi.
Ubungakanani obuqhelekileyo beRug
Ubungakanani beRug Rug
Itshathi yoBungakanani beRug
Bobuphi ubukhulu beRug kwigumbi lokuhlala
Umlinganiso oLungileyo wombhoxo weSofa yeCandelo
Igumbi lokutyela Ubungakanani berug
Bobuphi Ubungakanani Berug Phantsi Kwitafile Ejikelezileyo engama-48
Ubungakanani beRug kwiKing Bed
Ubungakanani beRug kwi-Queen Bed
Ubungakanani beRug kwiBhedi epheleleyo
Ubungakanani bendlela yokungena
Olunye ukhetho lwesiqhelo kunye neendlela zokuthatha isigqibo malunga nobungakanani bombhoxo onokwenziwa ngokugcina engqondweni ukuba bhetele kungcono. Ukukhetha ukhetho olukhulu kuthintela ukungqinelana kwigumbi elinethayile okanye umgangatho okhuni kwaye kunceda ukunqanda ukwenza igumbi liziva lingadibananga. Kukwabalulekile ukujonga ubungakanani begumbi kunye nokumila. Ukuba igumbi lide umbhoxo mawube mde, ukuba mkhulu umbhoxo kufuneka ulandele. Olunye uqwalaselo kufuneka lubume befanitshala, obuzakuthethwa ngeenkcukacha ngakumbi kamva.
Ezinye iiragi zifumaneka ngokulula, ezinokuthathwa kwivenkile kwaye ziziswe ekhayeni lakho, ngokusekwe kuseto oluxutyushwe apha ngezantsi onokulufumana kubungakanani obuqhelekileyo obudweliswe ngezantsi okanye uze nobukhulu besiko obulungele kakuhle igumbi lakho nendawo.
Ubungakanani bemigangatho yemigangatho efumaneka kwiivenkile ezininzi zezi:
Iinyawo ezili-9 ngeenyawo ezili-12 -Ligumbi lokuhlala eliqhelekileyo ubungakanani bombhoxo ohlala usetyenziswa kulwakhiwo lwefanitshala edadayo. Oku kuthetha ukuba ifanitshala ikhutshiwe eludongeni kwaye ihleli ngokupheleleyo etyaleni.
Iinyawo ezi-8 ngeenyawo ezili-10 - Obu bungakanani busebenza ngcono kumagumbi okuhlala anefanitshala ehlala ezindongeni. Imilenze yangaphambili yefenitshala kufuneka ihlale etafileni kunye netafile yekofu njengendawo esembindini.
Iinyawo ezi-6 ngeenyawo ze-9 -Ngamagumbi okuhlala anefanitshala ngokuchasene neendonga kunye nemilenze yangaphambili kumbhoxo.
Iinyawo ezi-5 ngeenyawo ezisi-8
4 inyawo ngo 6 inyawo
Iinyawo ezi-3 ngeenyawo ezi-5
Ububanzi beenyawo ezi-5
Ububanzi beenyawo ezi-6
Ububanzi beenyawo ezi-7
Ububanzi beenyawo eziyi-8
Ububanzi be-9 leenyawo
Ububanzi beenyawo ezili-10
4 inyawo ubude
Ziinyawo ezi-6 ubude
Iinyawo ezi-8 ubude
Iinyawo ezili-10 ubude
Iinyawo ezi-5 ubude
7 iinyawo ubude
9 yeenyawo ubude
Ngelixa oku kunokuba bubungakanani obuqhelekileyo bokuba ezi ntlobo ezithile zerugs zingene, zininzi nezinye iindlela zokukhetha ngokwesiko kunye nezinye iindlela ezikhoyo, ezi zezona zisetyenziswa ngokufuthi kwaye zenziwe ngobukhulu.
Emva kwexesha kweli nqaku iiragi kubhekiswa kuzo njengephakathi eliphakathi nelikhulu. Iiragi ezinkulu zihlala zi-8 iinyawo okanye ezinkulu. Phakathi phakathi kwe-5 ne-7 iinyawo. Iiragi ezincinci zihlala ziphantsi koluhlu lweenyawo ezintlanu. Ngelixa ezi zahluka kubukhulu kunye nokumila, yindlela ngokubanzi yokuqonda ukuba loluphi uhlobo lombhoxo olifunayo.
Igumbi lokuhlala iiragi zinobungakanani obahlukileyo obucetyiswayo kunye neemilo kunye nethiyori iyonke ngendlela ekufuneka isethwe ngayo, ngokusekwe kusetyenziso kunye nokunambitheka. Ezona zintathu zixhaphakileyo zezi: imilenze yonke embhoxo, imilenze yangaphambili erubhini kwaye akukho milenze erugini.
Ukuqala ngemilenze erugini, usebenzisa umbhoxo omkhulu, oku kufanele ukuba kuthathe lonke igumbi. Eli qhinga lenza ukuba igumbi lizive lifana kwaye lidityanisiwe, kwaye ligumbi lokugcina elikhulu lomgangatho onzima ngaphantsi. Ukuba usebenzisa indawo yokuvula evulekileyo, umbhoxo unika uhlobo olukhulu lwenkcazo yendawo.
Imilenze emibini ubeke umphambili wezitulo kunye nayo yonke itafile yekofu (ukuba kukho umntu okhoyo) embhoxo. Oku kufuna ubungakanani bomgangatho ohloniphekileyo wombhoxo, kuxhomekeke kwisithuba sezihlalo kwindawo. Oku kuhlala kusetyenziswa kumagumbi amade kwaye kuncinci, kuvalwe ngakumbi kumagumbi.
Kumagumbi amancinci kakhulu onqwenela ukuwenza abonakale emakhulu enza ngcono xa ityali ingachukumisi nayiphi na imilenze esihlalweni, inye kuphela itafile yekofu (ukuba ikho). Oku kufuna ityali encinci emalunga neesentimitha ezintandathu ngaphambili kwesahlulo ngasinye sezihlalo.
Igumbi elinye lokuhlala elahlukileyo linokuba ligumbi lokuhlala elinecandelo. Oku kunokwenziwa ngeendlela ezimbini, yonke imilenze ivaliwe okanye yonke imilenze icimile. Yonke imilenze kwiindlela zokuba umbhoxo kufuneka ubemkhulu ngokwaneleyo ukuba unokugubungela lonke icandelo.
Ukuthatha ubude kunye nobubanzi besofa kunye nokongeza malunga nee-intshi ezingama-18 ukuya kwezi-24 ezikunika ubungakanani bombhoxo owufunayo kuloo meko.
Ngayo yonke imilenze yakho unokulinganisa ngaphakathi l okanye u-U okanye icandelo liyancipha malunga nee-intshi ezi-6 ukuya kwezi-12 ukuze ulingane ngaphakathi kwecandelo. Le ndlela yesibini iyindlela ecetyiswayo njengoko izisa amandla kumbindi wendawo, apho abasebenzisi baya kuhlala behleli kwaye basebenzise indawo.
Kuyamkeleka ukuba ungayandisi ityali ngokupheleleyo phantsi kwe- isofa yecandelo . Nangona kunjalo, ukuba kunjalo kufuneka ubeke imilenze yangaphambili kumbhoxo nasemilenzeni yangasemva. Ukongeza, umthetho wayo olungileyo ukugcina yonke imilenze yeenxalenye zefanitshala zincinci.
Kukho ezinye iindlela zokubandakanya ityali enecandelo. Unokongeza umbhoxo ongqukuva ngaphakathi kwendawo yecandelo, apho itafile yekofu ejikelezayo ingumdlalo obalaseleyo, oku kuhamba ngokuhamba phambili ngamacandelo ajikeleziweyo, aqheleke ngakumbi.
imibono yasebusuku yothando kuye
Olunye ukhetho kukukhetha uyilo lwesofa ubume obunesiqingatha kwisiqingatha kukhetho lombhoxo, ubiza umbhoxo omkhulu, uhlekisa ngobungakanani becandelo kwaye ulisuse kancinane kwi-aesthetics.
Igumbi lokutyela iiragi zilunge kakhulu ukuhlala nayo yonke imilenze yokuhlala kunye netafile emgaqweni. Oku kungenxa yokuba izitulo bezingasebenzi kancinci kwaye zinzima, zibenza ukuba bangabikho kilter xa benesiqingatha kunye nesiqingatha ngaphandle kombhoxo.
Ukubanombhoxo phantsi kwetafile akukholisi kangako, njengoko bekuya kufuneka ibeyitagi encinci kakhulu xa izitulo zityhalelwe ngaphakathi. Ngelo xesha ityali ayincedi nganto.
Ubungakanani betafile yegumbi lokutyela yindlela umntu anokukhetha ngayo ubungakanani bombhoxo. Ngokwesiqhelo ufuna malunga ne-24 ukuya kwi-intshi ye-intshi eyongezelelweyo indawo yombhoxo kunendawo yetafile- oku kunika indawo yokuhlala izitulo. Ke ngoko kwitafile ejikeleze i-intshi ezingama-48 kufuneka ubuncinci irug eyi-72 yeerug. Oku kunika indawo yezitulo kunye nabantu abahamba bejikeleza, awufuni ukuba umbhoxo mkhulu kakhulu okanye ungene kwindlela yokuhamba kwaye unokuba yingozi yokukhubeka.
Ukuya kwigumbi lokulala iiragi ezinobungakanani kwakhona kukho yonke imilenze evaliweyo, yonke imilenze icimile, kunye nemilenze emitsha eyi-2/3 erhawutini. Xa isiza igumbi lokulala ngayo yonke imilenze erhawutini, bafuna ityali enkulu kakhulu, ngokusekwe kubukhulu begumbi kunye ubungakanani beebhedi isetyenzisiwe. Le ragi kufuneka ibe inkulu ngokwaneleyo ukuba ingene phantsi kwebhedi yasebusuku kunye nokuphela kwebhedi (ukuba bakho kwigumbi).
Ukuba kunokwenzeka, ityali mayibe ziisentimitha ezili-18 ukuya kwezingama-24 ubude kuneziqwenga zefanitshala, kodwa akufuneki ingene kwindlela yeendlela njengoko zinokuba yingozi yokukhubeka.
Ngaphandle kwemilenze kuhlobo lombhoxo oku kuxubeke kancinane kodwa ngokuba neerugs ezimbini ezincinci macala omabini ebhedi, mhlawumbi neyesithathu ecaleni kwebhedi. Ngokwesiqhelo iiragi ziya kuba bubude bebhedi, kwaye nokuba bububanzi obulinganayo njengendawo yokulala ebusuku okanye enkulu kancinci. Ngokwethiyori ezi iya kuba ziindawo zokuhamba, okanye apho iinyawo zabasebenzisi bezihla khona xa bengena bephuma ebhedini.
Isibini kwisithathu kunye nesinye kwisithathu sinika ubume obuhle ebhedini, ngelixa sisebenzisa umbhoxo ophakathi kuphela (ungabizi mali inkulu kunalawo makhulu) kwaye usanikeza ubushushu kwigumbi. Funda ngakumbi malunga kwigumbi lokulala Apha.
Ukumkani kufanele ukuba ibe ziinyawo ezili-9 ngeenyawo ezili-12 xa kufikwa kwisibini kwisithathu ebhedini. Inkulu kwi-10 yeenyawo ngeenyawo ze-14 zokugubungela ibhedi yonke kubandakanya iitafile zokuphela. Imbaleki ingaba malunga neenyawo ezili-9 ngeenyawo ezintathu.
Ukujonga kumgangatho oqhelekileyo wama-60 ububanzi ngama-80 ubude bebhedi enkulu, ityali kufuneka ibenobude obuziimitha ezisibhozo ubude. Kwibhedi yokumkanikazi enetafile zokuphela ezincinci uya kufuna ityali malunga ne-8 yeenyawo ngeenyawo ze-10. Umbhoxo omkhulu wokugubungela ibhedi yonke ngeziqwenga zefanitshala ezinkulu. Ukubeka nje phantsi kwebhedi ngeenjongo zokuhombisa i-5 yeenyawo ngeenyawo ezisixhenxe zenyawo. Iimbaleki zinokuba malunga neenyawo ezisi-8 ngeenyawo ezintathu.
Iibhedi ezinobungakanani obugcweleyo zinobungakanani obufanayo neebhedi ezimkhulukazi, oko kuthetha ukuba ubungakanani bombhoxo bunokufana ngokufanayo, le rug inokuba malunga neenyawo ezisi-8 ngeenyawo ezili-10. Inkulu yokugubungela yonke ibhedi, kwaye imbaleki zinokuba zi-8 iinyawo ngo-3 iinyawo.
Kuba izindlu zangasese zihlala zingamagumbi amancinci amahle, iiragi nazo zincinci zincinci. Kukho iindlela zokubeka into ngobude obufanayo netyhubhu, okanye ukubuyisa ububanzi besinki okanye indlu yangasese. Zizo zonke iindawo eziqhelekileyo zokubeka iiragi zangasese.
Ubungakanani kumbhalo wokungena uxhomekeke kakhulu kubungakanani kunye nokumila kwendlela yokungena ngokwayo. Zingaba nantoni na ukusukela kwisangqa esijikelezileyo okanye isiqingatha, ukuya koxande okanye isikwere. Sebenzisa umnyango njengesikhokelo sobungakanani ngokubanzi kunokuba yindawo elungileyo ukuqala. Oku kuhlala kubeka ubungakanani obujikeleze i-3 ukuya kwi-4 yeenyawo nokuba ububanzi okanye ububanzi.
Ukufumana umxholo onxulumene noko jonga igalari yethu yezona zidumileyo iintlobo zeebhedi .
INLOLOOM Sarina Indawo yedayimani, 5… $ 82.14 umthengisi ogqibelele (691) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
KWI-SUPERIOR IGudrun yangaphakathi Indawo yeRug, S… $ 59.66 umthengisi ogqibelele Izimvo eziyi-322 UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-nuLOOM yaseMorocco Blythe Area Rug, 8 'x… $ 164.38$ 619.00 umthengisi ogqibelele (21744) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-nuLOOM Indawo yaseBlythe yaseMorocco, i-5 'x 7 ... $ 94.94$ 169.00 umthengisi ogqibelele (21835) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Izinto eziSendlini eziBalulekileyo zingwevu kwesakhelo esimnyama… $ 89.99 umthengisi ogqibelele (4542) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
I-nuLOOM yaseMorocco iBlythe Accent Rug, 2 '… $ 15.56$ 70.99 umthengisi ogqibelele (21744) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Ingqokelela yeSafavieh Adirondack ADR109… $ 32.24$ 128.00 umthengisi ogqibelele (6189) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA × Enkosi!
Itheyibhile yokuphela ye-Furinno Turn-N-Tube, i-Cherry emnyama / emnyama $ 25.09 umthengisi ogqibelele (8388) UKUSETYENZISWA KWALO MHLA KUPHELA Iintengiso zeAmazon
ilokhwe yomtshato eluhlaza eluhlaza
Iqela le-bachelorette e-san francisco
Isicakakazi sembeko yomtshato
ngowuphi umbala ohamba nezihlangu ezimdaka